Qaxootiga dunida ee 50 milyan dhaafay - BBC Somali
Qaxootiga dunida ee 50 milyan dhaafay
23 Juunyo 2014
Image caption Arday qaxooti Soomaaliyeed oo warqad u qoray carruurta qaxootiga ee Suuriya
Hay'adda qaxootiga ugu qaabilsan Qaramada Midoobay ee UNHCR ayaa sheegtay in tirada dadka qaxootiga noqday ay kor u dhaaftay 50 milyan sannadkii la soo dhaafay ee 2013-dii. Tiradaan ayaa ah tii ugu badnayd tan iyo dagaalkii labaad ee aduunka..
Tirada la diiwaan-geliyey sannadkii tagay oo gaaraysa 51.2 milyan ayaa waxay kor u dhaaftay lix milyan tiradii la diiwaan-geliyeliyey sannadkii ka sii horeeyey ee 2012-kii sida ay sheegtay hay’adda UNHCR.
Dagaalada ka socda waddamada sida Suuriya, Jamhuuriyada bartamaha Africa iyo koonfurta Sudan ayaa hay’adu tilmaamtay in ay ka mid yihiin meelaha ugu daran ee ay tirade qaxootigu aad kor ugu kacday.
Image caption Qaxootiga dunida ayaa markii ugu horreysay tan iyo dagaalkii labaad ee dunida kor u dhaafay 50 milyan.
Hay’addu waxay intaasi ku dartay in walaac gaar ah uu ka jiro dad lagu qiyaasay 6.3 milyan oo qaarkood tobaneeyo sanno qaxooti ahaa.
Waxaa ka mid ah 2.5 milyan oo qof oo kunoolaa xaalad qaxootinimo iyo colaad oo kunool dalka Afghanistan, iyadoo Afghanistan ay ka mid tahay waddamada ay ka qaxeen qaxootiga ugu tirada badan. Dalka Pakistana waxay sheegaysaa UNHCR in ay martigelisay tirada qaxootiga ugu badan dunida oo lagu qiyaasay 1.6 milyan.
Qaramada midoobay waxay sheegaysaa in ay tahay in aanan qaxootiga si qasab dib loogu celinin meelaha ay ka soo qaxeen, ilaa laga hubiyo in goobahaasi ay ammaan yihiin.